မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 1 litre of Tears (J-drama review)
1 litre of Tears (J-drama review)
လွမ်းရ ဆွေးရ ငိုရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်ကြလားဟင်? ဗေဒါကတော့ လုံးဝမကြည့်ချင်ဘူး.. ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုတာ အပန်းဖြေဖို့... စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင်တောင် ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုံးတော့ ခဏမေ့နေချင်လို့... ဒီတော့ ငိုရတဲ့ကားတွေ အဆွေးကားတွေ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြည့်တယ်...
ရုပ်ရှင်သဘောအရ တခါတလေငိုရတာကို ဆိုလိုတာဟုတ်ဖူးနော်.. ဇာတ်လမ်းကိုက အဆွေးဇာတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုပြောတာ...
အဲဒါကြောင့်မို့လဲ ဒီ" 1 LITER OF TEARS"ဇာတ်လမ်းကို သိတာကြာပင်မဲ့ ဗေဒါမကြည့်ခဲ့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာ(forum)သွားသွား ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော်တော်များများက ကောင်းတယ်လို့ ချီးမွမ်းကြတယ်.. rating ကလည်းကောင်းတယ်... ဒါနဲ့ပဲ တခြားကားတွေလဲ ကြည့်စရာကုန်နေတာနဲ့ ဒီ "1 litre of Tears" ဆိုတဲ့ကားလေးကို ငိုရမှာသိပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ပဲလေဆိုပြီး စိတ်ပြင်ဆင်ပြီးကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်...
ဒီကားလေးက Spinocerebellar ataxia လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါခံစားခဲ့ရတဲ့ ရောဂါသည်တစ်ဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်မှတ်တမ်းတစ်ခုကို အခြေခံဇာတ်လမ်းစဉ်ပြီး လွမ်းဆွေးစရာ ကျန်းမာခြင်းဆိုတာ တန်ဖိုးထားစရာ သင်ခန်းစာရစရာအဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ...
ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းနဲနဲတော့ပြောပြမယ်နော်... SPOILER လို့တော့မထင်ပါနဲ့.. ဒီဇာတ်လမ်းကို နာမည်ရော ရောဂါသည်ဆိုတာရောသိပြီးမှတော့ နောက်ဆုံးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရမှာပါ.. ဒါပေမဲ့ သူဘယ်လောက် နောက်ဆုံးအချိန်ထိစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လဲ?သူဘယ်သူတွေကို အကျိုးပြုခဲ့လ?ဲ သူ့မိသားစုက သူမနဲ့အတူ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ? သူမရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ဘယ်လောက်ကြေကွဲဖို့ကောင်းသလဲ? စသည်ဖြင့် ပြောပြရင်တောင်မမှီပဲ ကြည့်မှ ရသပိုမြောက်မှာမို့ ပြောပါရစေ...
အထက်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေမဲ့နေ့မှာ Aya တစ်ယောက် ဘတ်စ်ကားပေါ်အိပ်ပျော်ပြီး မှတ်တိုင်ကျော်သွားလို့ ပြန်ပြေးအလာ စာမေးပွဲမဖြေဘူးဟုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ Azou Haruto ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့စတင်ဆုံခဲ့တယ်.. Aya ချော်လဲပြီး ဒူးပွန်းသွားလို့ Azou ကစက်ဘီးနဲ့လိုက်ပို့ရင်း ၂ယောက်လုံး စာမေးပွဲဖြေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်..
Aya Ikeuchi အကြောင်းပြောရရင်တော့ သူမမှာ ပျော်တတ်ပြီး သမီးတွေကိုသဝင်တိုတတ်တဲ့ အဖေရယ်.. စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ အမေရယ်.. မုန့်ဖိုးနဲနဲပဲရလို့အမြဲ complaint ပြီး အဖေနဲ့ရန်အမြဲဖြစ်တတ်တဲ့ညီမတစ်ယောက်ရယ်.. လိမ္မာပြီး Aya စကားနားထောင်တတ်တဲ့မောင်တစ်ယောက်ရယ်.. ကျောင်းမနေသေးတဲ့ ချစ်စရာ ညီမသေးသေးလေးတစ်ယောက်ရယ်ရှိတယ်.. Aya က စာတော်ပြီး Basketball ကစားလဲတော်တယ်.. သူမက သူမsenoir Basketball player ၁ယောက်ကို အရင်ထဲက crush ဖြစ်နေခဲ့တယ်... senior senpie ကလဲ သူမကို သဘောကျတယ်..
Asou Haruto ဆိုတာကတော့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးရဲ့သား.. လူတွေကိုကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ကောင်းရှိ အရည်ချင်းရှိတဲ့ သူ့အစ်ကို ရေနစ်သေပြီးထဲက "လူဆိုတာ ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားသေရမှာပဲ" ဆိုပြီး မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်ပြီး ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတဲ့ ကောင်လေးပေါ့.. အားလုံးကသူ့ကိုဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်ပေမဲ့ သူ့ကိုသူဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသူ.. ဒါပေမဲ့ သူလဲစာတော်တယ်.. အမြဲဘုပြောတတ်ပေမဲ့ သနားကြင်နာတတ်တယ်..
ဒီလိုနဲ့ ၂ယောက်လုံး အထက်တန်းတတ်ဖြစ်တော့ တစ်တန်းထဲကျတယ်.. အထက်တန်းကျောင်းစတဲ့ နေ့မှာပဲ Aya တစ်ယောက် အိမ်ကပြေးထွက်လိုက်တာ သူ body က control လုပ်လို့မရပဲ ချော်လဲပြီး မေးစေ့ကွဲသွားရော.. ဒီလိုနဲ့ဆေးရုံသွားရင်း ကျန်းမာရေး အသိရှိပြီး သားသမီးတွေကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ အမေက သူ့သမီး ချော်လဲတာ လက်နဲ့ မထောက်ပဲ မေးနဲ့ကျတာကို သံသယရှိလို့ body check up ပါလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်.. အဲဒိနောက် တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ ဆေးစစ်ချက်ကို Aya အမေတစ်ယောက်ပဲ ကျိတ်မှိတ်ခံစားခဲ့တယ်.. တခြားဆရာဝန်တွေကိုလဲ လိုက်တိုင်ပင်တယ် internet မှာလဲ research တွေရှာတယ်…
အဲဒိရောဂါက ဦးနှောက်နဲ့တော့ပတ်သတ်တယ်.. ဘာဖြစ်တာလဲတော့သေချာမသိဘူး… အဲဒိရောဂါဖြစ်ရင် ပထမ အနီးအဝေးမချိန်တတ်တော့ဘူး.. ခန္ဒာကိုယ်ထိမ်းချုပ်လှုပ်ရှားမှု တစ်စတစ်စလျှော့နည်းလာပြီး.. လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်ပြီး wheelchair နဲ့နေရမယ်.. နောက်ဆုံး စကားမပြောနိုင် အစားစားရင် နင်မယ်..ကောင်ကောင်းမမြိုနိုင်တော့ဘူး.. နောက်ဆုံး အိပ်ရာပေါ်လဲမယ်… စတဲ့နာတာရှည်အသက်ဆုံးနိုင်တဲ့ရောဂါပေါ့…. ကိုယ်အင်္ဂါထိမ်းချုပ်မှုမရတော့ပေမဲ့… အသိစိတ်ကတော့ အပြည့်ရှိနေပါတယ်.. ကုသဖို့နည်းလဲခုထိမတွေ့သေးပါဘူး...
သေချာတဲ့အနာဂတ်မရှိပေမဲ့ သူမရဲ့ COURAGE နဲ့ POSITIVE ATTITUDE အရကျောင်းဆက်တက်မြဲ.. သူငယ်ချင်းများနဲ့တူတူ ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်... သူမအချစ်ဦး Yuji စွန့်ခွာသွားပြီးနောက် သူမပေါ်မှာအေးစက်စက် ဆက်ဆံတတ်ပေမဲ့ အမြဲအားပေးဂရုစိုက်တတ်တဲ့ Asou Haruto နဲ့မေတ္တာမျှခဲ့ပါတယ်... နောက်ဆုံးသူမအသက်၂၅နှစ်မှာငြိမ်းချမ်းစွာ စွန့်ခွာသွားပေမဲ့ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို အကောင်းဘက်ပြောင်းလဲအောင် လမ်းပြပေးခဲ့တယ်... Aya ဆုံးပြီး Asou တစ်ယောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့ပုံ.. Aya ကိုလဲမမေ့ခဲ့ပုံ.. Aya ညီမလေးလဲ အရင်ကစာမကြိုးစားပေမဲ့ နောက်ဆုံး ကြိုးစားပြီး Nurse ဖြစ်ခဲ့ပုံကို Special Episode မှာပြသခဲ့ပါတယ်...
ဒီလိုရောဂါဆိုးကြီးကို Aya နဲ့အတူ သူမ မိသားစုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပုံ.. ရောဂါဆိုးလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းဘာတွေ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပုံ.. ရောဂါသည်မှန်းသိတော့ အချစ်တုကစွန့်ခွာသွားပြီး အချစ်စစ်နဲ့ ဘယ်လိုသံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့ပုံ ... အကောင်းကနေ handicapped ဘဝမှာလူတွေရဲ့အကြည့်ကို ရင်ဆိုင်ရပုံ.. ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲ တတ်နိုင်သလောက်လူတွေကို ဒုက္ခိတဘဝနဲ့တင်အလင်းပြကူညီခဲ့ပုံ.. စတဲ့ အလွမ်း အဆွေး သင်ခန်းစာယူစရာ တွေကို.. အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးရောပြီး မပျင်းရအောင် မင်းသမီးချော Erika Sawajiri နဲ့ မင်းသားချော Ryo Nishikido တို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရသမြောက်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားကြပါတယ်..
အထူးသဖြင့်တော့ အဓိကသရုပ်ဆောင် Erika ပါ.. 2005 မှာထုတ်လုပ်ခဲ့ချိန်မှာ Erika ရဲ့အသက် ၁၉နှစ်ပဲရှိပါအုံးမယ်.. မင်းသား Ryo ကတော့ ၂၁နှစ်ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ Episode ၁ခုမှာ ပရိတ်သတ်ကို တကယ် " 1 litre of Tears" ကျလောက်အောင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဆောင်ပြသွားပါတယ်..ပုတ်ခပ်တယ်လို့တော့မထင်စေချင်ပါ.. မြင်တာလေးပြောချင်တာပါ.. မြန်မာပြည်က နာမည်ရ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အသက်အရဆို အဖေ အမေခန်း တောင်ရိုက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်.. (ထားလိုက်ပါတော့ သူတို့အကြောင်းနောက်မှပဲပြောမယ်..)
ခုတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ Fun make MV လေးတွေကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်.. သီချင်း ၃ပုဒ်လုံးက အဲဒိထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေပါ.. ဒီဇာတ်လမ်း ၁၁ ပိုင်းလုံးကြည့်ဖို့အချိန်မရသူများအတွက် ဒီ MV လေးတွေကြည့်ရင် အချိန်တိုအတွင်း တစ်ကားလုံး အနှစ်လေးတွေ အမြည်းခံစားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်...
ဒီသီချင်းကတော့ opening song ပါ.. ဇာတ်လမ်းထဲမှာလဲသုံးပါတယ်.. K ရဲ့ Only Human လို့အမည်ရပါတယ်.. သီချင်းအဆုံးမှာ Aya, Disable ကျောင်းကိုပြောင်းသွားတဲ့နေ့မှာ သူမ Classmate တွေ ကျောင်းကပွဲမှာ သူမခေါင်းဆောင်ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ အခန်းပါ.. အဲဒိနောက်ကတော့Haruto နဲ့ Aya Memory sence လေးတွေပါ...
ဒီ Video လေးကတော့ ကျမဘယ်တော့လာမလဲ လာမလဲနဲ့ စောင့်ခဲ့ရတဲ့ အခန်းလေးပါ.. Haruto ရဲ့ ချစ်ရေးဆိုတဲ့ အခန်းပါ.. သူ ရည်းစားစကားပြောချိန်မှာ Aya တစ်ယောက် စကားတောင်ကောင်းကောင်း မပြောနိုင်တော့ပါဘူး.... Aya နဲ့ တတွဲတွဲလုပ်နေထဲက Haruto အဖေ ဆေးရုံအုပ်က Haruto ကို ဒီကောင်မလေးကို မင်းချစ်မယ်ဆိုရင် Mentally prepare လုပ်ထားဖို့.. သူ့အနေနဲ့တော့ မဖြစ်စေချင်ကြောင်း ကြိုသတိပေးခဲ့တဲ့ကြားက ချစ်မိသွားတာပါ.. Aya နဲ့ ချစ်ပြီး သူဆရာဝန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့သားကို သူ့အဖေလဲ အဆိုးထဲက အကောင်းအနေနဲ့နောက်ပိုင်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး... သူချစ်ရေးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကွက်လေးက တကယ့်ကို Bitter Sweet ပါပဲ.. စိတ်ထဲမှာ maricle happen ပြီး ချစ်သူ ၂ယောက်ကို ပေါင်းစေချင်လိုက်တာ.. Haruto လိုချစ်သူမျိုးလဲ လိုချင်လိုက်တာ.. (ဟီး.. ကြော်ငြာဝင်တာ).. video clip လေးက5mins ပဲ ကြည့်သွားပါ.. ခံစားသွားပါ...
ကျမရဲ့ ရုပ်ရှင်ရူးသွပ်မှုကို အဆုံးထိ လာရောက်မျှဝေခံစားပေးတဲ့ စာဖတ် သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့....
Posted by mabaydar at 8:29 PM
I have watched the first2episodes of this drama. I know it's sad but just like you said, many people have recommended it. I got distracted from continuing to watch it (due to some reasons which I forgot now) and I haven't continue it yet. I was caught up in other dramas. I'm currently watching I Am Sam, just2more episodes to go now.
little Artikino said...
အခုက အဲဒီဇာက်ကားကို episode နဲ့ မဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုး movie တစ်ကား တည်း အနေ နဲ့ကြည့်လို့ ရတယ်လေ... episode နဲ့ ဟာကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်... movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ mysoju မှာ သွားကြည့်လို့ ရတယ်..
9/11/2009 12:04 AM
ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့ကောင်းတဲ့ ခိုးချထားသော မြန်မာဇာတ...